Esory fa Yellow Grin Ary Get A Bright White Smile | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Misy lalana ho azonao atao mba mahafotsy ny nify soa aman-tsara? Tsy ny rehetra ao amin'ny tsara indrindra na azo itokisana. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fomba voaporofo fa azo antoka nify amim-pitandremana sy miadana.
Raha tsapanao fa mitady voan'ny hihy fahatsapana avy amin'ny roa ora ravin, tokony hiezaka mba hanala ny ravin taorian'ny 30 minitra fa tsy. Na dia ilaina ny mampihatra ny ravin in-roa isan'andro ho an'ny 30 minitra nandritra ny tapa-bolana, dia tsy ho azo inoana ny mahatonga ny fahatsapana hihy.
SOSO-KEVITRA! Ny mpitsabo nify afaka manao nify Whitening amin'ny tamin'ny laser. Mety ho ny fomba haingana manana ny nify hiverina indray ny voalohany loko fotsy.
Izany dia mitaky anao mba hitsidika ny mpitsabo nify sy ny vokatra faharoa ny tsy. Dentists afaka manolotra fomba mba mahafotsy ny nify izay mety ho mampidi-doza loatra ny laypeople ampiasaina amin'ny fivarotana.
Mba hihazonana fotsy nify, ve no tokony ho natao tsy tapaka matihanina cleanings. Mifidiana ny fitsidihana ny mpitsabo nify isaky ny enim-bolana, Ny tena tsara ny manaraka manao fanendrena raha ianao no misy isaky ny fanadiovana. Tokony hiezaka ny hitandrina io satria ny ankamaroan'ny fotoana insurances handrakotra izany fomba.
SOSO-KEVITRA! Aoka ianao ho mailo, rehefa mihinana na misotro rehefa ianao mahafotsy ny nify. Whitened nify kokoa mora stains.
Laser Whitening nify no iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha ny amin'ny Whitening ny mpitsabo nify tolotra. Izany angamba no alokaloka izy ireo tany am-boalohany dia iray haingana fitsidihana. A bleaching mpandraharaha dia ampiharina amin'ny nify, ary avy eo izy dia nitifitra tamin'ny tamin'ny laser hampavitrika. Ny nify dia hatrany amin'ny dimy na enina matoatoa.
Mety hampitombo anaty ny tsy fahazakana ny sasany nify Whitening vokatra. Na dia mety ho vonjimaika toe-javatra, mety mbola hanimba. Raha miaina izany fanaintainana, intsony ny fampiasana ny vokatra ka jereo ny mpitsabo nify raha vao afaka ianao. Ny mpitsabo nify hafa afaka manolotra vokatra na vahaolana mba hanampy mahafotsy ny nifinao amin'ny fomba hanala.
SOSO-KEVITRA! Add fanaova soda ny nify fanilihana mahazatra. Banky soda no fomba tsara indrindra mba amim-pahombiazana, ary mazava ho mahafotsy ny nify.
Ny zavatra simika ao amin'ny rehetra ireo hampietreny vokatra kokoa amin'ny firaiketam-po tanteraka ny nify. Ny vokany Marokoroko sy hanala ny rantsan-borosy no mampanan-azo antoka Ny nifinao dia madio.
Frezy dia toy ny fitsaboana voajanahary ho voaloto nify. Izany fomba efa voaporofo miasa. Mino izany na tsy, namafa ny voapaika frezy eo amin'ny nify dia afaka mahafotsy azy ireo. Aoka ny voaroy fitsaharana ho an'ny manodidina ny dimy minitra amin'ny nify mba hahazo ny tsara indrindra ny fitsaboana vokatry ny.
SOSO-KEVITRA! Raha mampiasa misy nify-Whitening vokatra, mijanona avy hatrany raha misy fahasosorana dia hampivelatra. Ny fahatsapana mety ho famantarana fa ianao no manimba ny nify.
Tena tokony handeha ho any amin'ny mpitsabo nify talohan'ny Whitening ny nify raha tsy voatsabo lavadavaka na mijaly amin'ny aretina hihy. Tsy maintsy mandray fanampiny fikarakarana rehefa Whitening ny nify. Ny mpitsabo nify, dia ho afaka hilaza anao hahita ny tetikady izay no tena mahomby sy azo antoka ho anareo hanao izany.
Azonao atao ny hanana matihanina mahafotsy ny nify raha mitady vokatra haingana na tena ratsy ianao staining. Io fomba vidin'ny kely kokoa, fa afaka tsara kokoa mahafotsy ny nify, ary mety ho haingana kokoa noho Whitening hafa fomba.
SOSO-KEVITRA! Raha toa ianao ka mpifoka sigara dia ny zavatra voalohany tokony atao dia ajanony ny fifohana sigara. Raha mifoka sigara, mahafotsy ny nify, ary avy eo dia mbola mazava ny, ianao hanondrahana ny vola izy.
Ravin izay mahafotsy nifinao dia lafo ary tena takatry ny. Ireo ravin dia apetraka eo amin'ny nify. Whitening ravin nahafinaritra fohy firongatry amin'ny mpitia, noho ny tonga lafatra latsaky ny vokatra.
Raha tsy maintsy misotro zava-pisotro izay mety hahatonga staining, manaraka azy amin'ny rano. Mety hisorohana ny nify tsy hatao voaloto. Safidy iray hafa dia ny misotro izany amin'ny alalan'ny mololo, na mampiasa tsy hangalana ronono amin'ny kafe.
SOSO-KEVITRA! Rehefa avy Whitening ny nify, mampihatra Vaseline mba hampahatsiahy anao hitandrina mitsikitsiky. Na dia mety tsy ho ilay safidy tastiest, ny petrolatum Jelly dia hanangana miaro, vonjimaika coating izay hisorohana staining.
Aza eny ny talantalana miborosy nify, indrindra raha misy loko nanampy. Miborosy nify raha ny marina dia afaka hahatonga ny nify mba ho tonga bebe kokoa discolored. koa, be dia be amin'izy ireo manana toaka toy ny ingredient izay mety hahatonga ny lela sy ny ramy saro-pady, ary koa ny mahazo ao an-ra.
SOSO-KEVITRA! Ianao ho sahy ny tsikinao raha matoky kokoa momba ny fofonaina. Hilelaka ny indray ny madio tanana mba hamaritana raha ratsy fofonaina.
Organic voaniho menaka dia Whitening mpandraharaha noho ny nify. Fa fotsiny 10 minitra isan'andro, manandrana rinsing amin'ny voaniho diloilo, ho, fara fahakeliny 10 minitra isan'andro. Rehefa avy eo ho eo 10 minitra, hosasany ny vavanao ka borosy rehefa ara-dalàna te. Dia azo inoana fa hahita vokatra rehefa afaka andro vitsivitsy monja.
Fantaro izay fomba Whitening ny nify no hataony ho anao. Raha manana idealy azo tanterahina mikasika ny vokatra ampiasainao, dia mety rivotra ka diso fanantenana ny hafotsiany ny nify. Diniho ny antony anjara, tahaka ny taona, ary ny halehiben'ny stains sy discolorations amin'ny nify. Anontanio ny mpitsabo nify izay hitranga.
SOSO-KEVITRA! Mitsako persily na cilantro vaovao dia afaka manampy anao hanazava ny tsikinao. Ireo anana voajanahary dia ahitana fananana izay afaka hanampy amin'ny neutralizing tasy-miteraka bakteria.
Miborosy nify rehefa avy misakafo dia ampahany manan-danja amin'ny fitandremana azy ireo mamirapiratra sy mamirapiratra. Izany no zava-dehibe indrindra, rehefa misotro kafe ianao.
Dark poti-tsakafo mety hahatonga ny vavanao mba hampietreny rehefa mandeha ny fotoana. Ialao ireo stains amin'ny mitsako ny siramamy aorian'ny sakafo maimaim-poana hihy. Izany dia dislodge poti-kanina, ary hiaro azy amin'ny staining ny nify.
SOSO-KEVITRA! Ampidiro flossing tsy tapaka ao amin'ny andavanandro. Izany Afaka Manampy manala ny takelaka izay afaka discolor ny nify.
Frezy dia fomba mora ho azy hanazava ny nify toa fotsy. Frezy dia afaka efa nampiseho vokatra tena tsara toy ny fiantraikany eo amin'ny Whitening nify vahaolana. Avelao ny frezy mba hijanona eo amin'ny nify, fara fahakeliny, dimy minitra ho an'ny vokatra tsara indrindra.
Raha tianao ny nify mba ho fotsy mangatsakatsaka, tsy lanin'ny voasary na hafa Citrus voankazo. Miezaka ny tsy misotro koa ny juices. Ny amine amin'ny sakafo ireo no hihinana intsony eo nify. koa, efa voaporofo fa io karazana voankazo sy ny ranom mampitombo ny vintana ho asidra reflux raha levona alohan'ny am-pandriana, izay kosa fiantraikany ihany koa ny tsikinao. Ary noho izany, miezaka indrindra fa tsy ireo sakafo sy ny juices amin'ny alina.
SOSO-KEVITRA! Ampidiro kokoa ny zavatra vita amin'ny ronono ao amin'ny sakafo. Strong, nify salama dia azo lazaina fa ny sakafo ao amin'ny sakafo toy ny yogurt, ronono sy ny fromazy.
Afaka manana Whitening concoction ao an-trano miaraka amin'ny peroxyde sy ny mofo soda. Ampiasao izany zavatra mifangaroharo ny miborosy nify mandritra ny folo minitra no lasa. Mitandrema mafy aza ianao miborosy, araka izay mety hahatonga fahasosorana hihy.
Ny fomba tsotra ho an'ny fotsy nify dia ny afangaro table sira miaraka amin'ny voasary makirana ranom. Tandremo ny tombo-kase misy pentimpentina eo amin'ny fitoeran-javatra, mba afaka mampiasa azy io matetika, ary dia zara raha manimba.
SOSO-KEVITRA! Misotro alalan'ny mololo afaka manampy hisorohana ny nify stains. Amin'ny misotro amin'ny alalan'ny mololo, ianao manamaivana ny fotoana fa ny nify no nahafantatra ny rano.
Bakteria dia hitombo manodidina ny vavanao rehefa avy mihinana. Raha ny nify tsy diovina, ny bakteria mety mahatonga be dia be ny olana, dia aza adino ny miborosy azy ireo.
Alao ny helo-drano ravina maina sy maina voasary peels ka kosohy ny azy ho vovoka. Add ny nidaboka ny paompy rano ho amin'ny vovoka, ary dia avy hatrany dia manao voajanahary nify Whitening toothpaste. Izany ihany koa no hita hisorohana ny olana hafa mifandray amin'ny nify.
SOSO-KEVITRA! Voankazo dia azo ampiasaina ho toy ny lehibe, voajanahary, azo antoka fomba mahafotsy nify. Frezy miasa tsara indrindra ho amin'izany tanjona.
Raha ny trays Tsy mety ny nify tsara, zavatra simika avy amin'ny Whitening gel seep avy dia afaka miteraka hihy fahasosorana.
Misy fanafody voajanahary dia hanampy mahafotsy nify, toy ny paoma cider vinaingitra. Efa fantatra hanadiovana ny nify ary manala stains raha hanaisotra bakteria ao am-bavanao. Andramo gargling ny vinaingitra momba ny indray mandeha isan'andro eo anoloanareo miborosy nify.
Ny tsikinao dia hijery hazava. Andramo ny fampiasana loko amin'ny molotra lokomena izay toa manga-monina, na mampiasa molotra gloss. Colors izay miloko mena manopy manga-tined na voaroy manampy ny nify toa fotsy. Alaviro matte molotra vokatra amin 'ny mety hahatonga ny nify.
Rano fisotro madio rehefa mandany zava-pisotro izay hampietreny nify afaka hitandrina ny nify. Ny rano hosasany misakana ny tasy mahatonga zava-pisotro avy amin'ny setting.You dia afaka ihany koa ny misotro amin'ny alalan'ny mololo.
Ataovy azo antoka fa miborosy, floss, ary mampiasa ny hihy otra, fara fahakeliny, indroa isan'andro. Ny tena optimum fomba mba hahazoana antoka ny nify dia ny miborosy sy floss isaky ny mihinana na misotro ianareo na inona na inona. Ity fomba azo antoka ny manala ny sakafo korontan-trano rava sy ny takela-pahatsiarovana izay mety hiafara staining ny nify.
frezy Mametaka Afaka manampy anao mahafotsy nify. Masy vaovao frezy ho Mametaka, ary avy eo mampihatra ny mifangaro ny nify. Ny lasa frezy dia hahatonga ny nify ho fotsy tsy misy fa ilaina ny henjana simika. Io fomba Whitening an-trano dia afaka manampy anao tsy ny-Whitening ka hanome anao mazava ho fotsy tsiky.
Miborosy nify mety ho mahatonga ny sasany amin'ny nify. Anontanio ny mpitsabo nify raha na tsy manana nify fa afaka manohitra ny vokatry ny fampiasana miborosy nify.
By izao fantatrareo misy be dia be ny fanehoan-kevitra momba ny Whitening nify. Tokony hanana hevitra vitsivitsy izao mikasika ny fomba hahazoana izany voaravaka perla fotsy tsiky tsy manimba ny nify. Tanteraho ny toro-hevitra ato amin'ity lahatsoratra ity, ary mandehandeha manao soa aman-tsara ny tsikinao mamirapiratra.
Sokajy: Mahafotsy Teeth Tips Tags: Bright White Smile, Get A Bright White Smile, ny fomba mahafotsy nify, mahafotsy ny nify, mahafotsy nify, mahafotsy ny nify, Yellow Grin